​तपाईंको जिल्लामा मतपत्र कस्तो हुन्छ ? हेर्नुहोस्
Sat, May 26, 2018 | 15:50:34 NST
10:24 AM ( 1 year ago )
काठमाडौं, वैशाख ७ – यही वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह चुनावमा सबै जिल्लाको मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनेछन् । निर्वाचन आयोगले सबै जिल्लाको मतपत्रको नमूना सार्वजनिक समेत गरेको छ ।
जिल्लागत रुपमा दर्ता भएका दलहरुको संख्याका आधारमा मतपत्र तयार पारिएको छ । धेरै दल भएका जिल्लामा मतपत्रको आकार ठूलो हुन्छ भने थोरै दल भएका जिल्लामा मतपत्रको आकार पनि सानो हुनेछ । आयोगका अनुसार सबै जिल्लाका लागि ६ प्रकारको मतपत्र तयार पारिएको छ ।
तपाईंको जिल्लामा मतपत्र कस्तो हुन्छ ? थाहा पाउन यहाँ जानुहोस् ।